नेटफ्लिक्ससँग रचनात्मक क्रिएटिभको लागि वृत्तचित्र श्रृंखला छ क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | कलाकारहरू, प्रेरणा, धेरै
के तपाईंलाई श्रृंखला मनपर्छ? के तपाईंलाई थाहा छ रचनात्मकका लागि त्यहाँ वृत्तचित्रहरू छन्? यस पटक हामी आज धेरै प्रयोग गरिएको अडियोभिजुअल प्लेटफर्मको पक्षमा भाला भाँच्दैछौं: Netflix.
यदि तपाईंलाई अडियोभिजुअल सामग्री मनपर्दछ भने, तपाईं आफैले सिक्न र आफुलाई खेती गर्न लगानी गर्न सक्नुहुनेछ केही प्रस्तुत वृत्तचित्रहरूको साथ। हामी विशेष एउटालाई सन्दर्भित गर्छौं "सार: डिजाइन को कला"। यो एक दस्तावेजी श्रृंखला हो कि डिजाइन को क्षेत्र मा कलाकार हाइलाइट। तिनीहरू स्वतन्त्र अध्यायहरू हुन्, त्यसैले हामी ती दृश्यहरू देख्न सक्छौं जुन सबैले हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्छन्।
1 "सार" को सामग्री
3 यसको लेखकलाई भेटौं
"सार" को सामग्री
बिभिन्न अध्यायहरू डिजाइनरमा केन्द्रित छन् बिभिन्न विषयहरु जसमा ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, चित्रण, मोटरस्पोर्ट्स, वास्तुकला, आन्तरिक डिजाइन, सेट डिजाइन र जुत्ता डिजाईन सामेल छन्।
दुई वर्ष काम पछि, एक गुणवत्ता कास्टको साथ हामी फेला पार्दछौं जुन डिजाइन को दुनिया मा सबै भन्दा राम्रो लेखक, यो उत्पादन अपेक्षा मा उच्च लक्ष्य छ।
पहिलो सत्र 47 मिनेटको अध्यायबाट सुरु हुन्छ जसले हामीलाई चित्रकार क्रिस्टोफ नीमान्नको संसार देखाउँदछ। यसले हामीलाई कलाकारको जीवनको सानो हिस्सा, साथै वास्तविक प्रोजेक्टहरू पनि देखाउँदछ जुन उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। बढी विशिष्ट हुन, यो Portada बाट "न्यू यॉर्कर"जसमा उनले आफ्नो डिजाइनरको चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो पहिले ºº०º डिजिटल कभर, यो, संवर्धित वास्तविकता हो। यसलाई हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले यस कामको प्रतिभा देख्नुहुनेछ।
अर्को अध्यायले अनुसरण गरेको हामीलाई डिजाइनरको रचनात्मक प्रक्रियाको बारेमा बताउँछ टिंकर ह्याटफिल्ड प्रसिद्ध नाइके ब्रान्डको जुत्ताको साथ। हामी पनि एस् डेवलिन, आर्किटेक्ट, फोटोग्राफर र अन्य धेरै प्रोफाइल जस्तै spenary डिजाइनर पाउन।
यसको लेखकलाई भेटौं
यो वृत्तचित्र श्रृंखला भएको छ स्कट दादिच द्वारा बनाईएको, एक बहुमुखी व्यक्ति उहाँ एक डिजाइनर, सम्पादक, लेखक र फिल्म निर्माता हो। ऊ युवावस्थादेखि नै एक उद्यमी हो। उनले जहिले पनि व्यवसाय र समाजमा प्रविधिको महत्त्व र प्रभावलाई बुझेका छन्।
स्कट ड्याडिच को रूप मा उनको पारित द्वारा छुट WIRED पत्रिकामा सम्पादक-इन-चीफ। यस चरणमा उनले एप्पलको लागि पत्रिका अनुप्रयोगको विकासको लागि अग्रसर गरे। यो एउटा हो पहिलो प्रकाशन आईप्याड मा आफ्नो सामग्री स्थापना गर्न.
यी सबै कलाकारहरूको आकांक्षाका साथ हामी तपाईंलाई यो नयाँ वृत्तचित्र पत्ता लगाउन हौसला दिन्छौं। तपाईं कला र प्रेरणा को एक खुराक को लागी छोड्ने छैन आगे जाने र यसलाई एक बिंदु दिन तपाईंको जीवनको लागि रचनात्मकता.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » नेटल्फिक्ससँग क्रियटिभको लागि श्रृंखला छ